Catalytic तटस्थता प्रणालीहरू कार निकास पाइप बाट वातावरणमा जारी हानिकारक पदार्थहरूको मात्रा घटाउन प्रयोग गरिन्छ। तथापि, तटस्थ तत्व लामो समय सम्म काम गर्दछ जब उत्प्रेरक तत्व राम्रो क्रम मा छ। समयको साथ, यो प्रभावकारी काम गर्न बन्द छ। आउनुहोस् , विस्तारमा विचार गरौं एक उत्प्रेरक, यसको घाटा, समाधानहरू। यो पनि निदानका लागि यो उत्प्रेरक हुन्छ जब संकेतहरू थाहा पाउन महत्त्वपूर्ण छ , समस्याको लक्षण ।
Catalytic कनवर्टर - यो के हो र किन?
आधुनिक कारहरूमा, यो निकास प्रणालीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हो। उपकरणले हानिकारक पदार्थहरूबाट निकास ग्यासहरू शुद्ध गर्दछ। नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोकार्बनका विभिन्न समूहहरूको यो ओक्साइड। उत्प्रेरक भित्र हनीकोबक्सको रूपमा विशेष फिल्टरहरू छन्। तिनीहरू बहुमूल्य धातुहरू छन्। यो इरिडियम वा प्लेटिनम हुन सक्छ। यो यी धातु हनीकम्पको लागि धन्यबाद छ कि हानिकारक पदार्थहरू बेवास्ता गरिन्छ। यन्त्रको डिजाइनमा, तीन मुख्य तत्त्वहरू धातु काल, एक क्यारियर इकाईसँग इकाई र थर्मल इन्सुलेशनको एक तह हो। मुख्य तत्व वाहक इकाई हो। यसको डिजाइन दुर्दम्य सिरेमिक सामाग्री को एक आधार हो। संरचनामा मधुरोब जस्तो समान कक्षहरू छन्। तिनीहरू ग्यासहरूको साथ सम्पर्क क्षेत्र बढाउन डिजाइन गरिएको छ। हनीमकबमा प्लेटिनम र इरिडियम को एक मिश्र धातु छ। प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु को तह संग निकास ग्याँस को अन्तरक्रिया को समयमा रासायनिक प्रतिक्रियाहरु उत्प्रेरक को एक मजबूत हीटिंग को लागि नेतृत्व गर्दछ। फलस्वरूप, हानकम्पको धातु सतहलाई छुट गरेर सबै हानिकारक अनावश्यक पदार्थहरू तुरुन्तै जलाइन्छन्। दहन प्रक्रियामा, अक्सीजन प्रयोग गरिन्छ, जुन दहन कक्ष बाहिर निस्कने पछि निकास ग्यासहरूमा अवस्थित हुन्छ। थप निकास प्रणालीमा, पूर्णतया हानि रहित पदार्थ - N2र CO2- उत्प्रेरक छोड्नुहोस्।
उत्प्रेरक र तिनीहरूको कार्यमा प्रयोग गरिएका पदार्थ
उत्प्रेरित कन्वर्टर्समा थुप्रै पदार्थहरू प्रयोग गरिन्छ। यो रोडियाम, प्लेटिनम, पालीडियम, इरिडियम छ। पहिलो तत्व कमजोरी उत्प्रेरक हो। यसको काम कुनै पुनःस्थापना गर्न र यसलाई सबैभन्दा साधारण नाइट्रोजनमा बदल्नु हो। प्लैटिनम र प्यालाडियम ओक्सिडेंटको रूपमा सेवा गर्दछ। तिनीहरूले अनावश्यक हाइड्रोकार्बनको अक्सीकरण को त्वरण को उत्तेजित गर्न को लागी चाहिए, र त्यसपछि उनलाई भाप मा बदलन। CO कार्बन डाइअक्साइडमा परिवर्तित हुन्छ।
खाली तत्वको लक्षणहरू र लक्षणहरू
यदि उत्प्रेरक छ भने, लक्षणहरूले यो निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ। स्वाभाविक रूप देखि, यस लक्षणमा अन्य लक्षण पनि बोल्न सक्छ। तर अधिक विस्तृत निदान संग, सबै केहि उत्प्रेरक को बारे मा कुरा गर्दै छन्। यदि तत्व पूर्ण रूपमा प्लगइन गरिएको छ भने, इन्जिन सुरु हुनेछ, तर तुरुन्तै जानुहोस्। कार छिटो छिटो हुन्छ। जब चालकले गतिवर्ती पेडल थिच्दछ, त्यहाँ यो महसुस हुन सक्छ कि कारले बम्पर पछाडि पछि केहि पकडिरहेको छ। यसले तटस्थको भित्र झगडाको उपस्थितिलाई संकेत गर्दछ। म कसरी उत्प्रेरित छ भनेर बताउन सक्छु? लक्षणहरूमा ईन्धन खपत बढेको छ। तर यो एक्सीलेटर पेडललाई शक्ति र प्रतिक्रिया हराएको बेला मात्र खातामा लिन सकिन्छ। त्यो हो, कार ड्राइविंग रोकियो, र खपत समय मा वृद्धि भयो। साथै, चिसो इन्जिनको सुरुवातको समयमा एक कास्टिक र अप्रिय गंध देखिन सक्छ।
यो एक सार्वभौमिक विशेषता हो, त्यसैले तपाईंले पहिले कोडको त्रुटि कोड थाहा पाउनु पर्छ। यी कोडहरूको डिकोडिङ कारको निर्देशनमा छ। तर यो दिमाग मा हुनु पर्छ कि यस्तो लैंप केवल लम्बडा हुनेछ जब दुई लांम्बा जांच को कार को निकास प्रणाली मा स्थापित गरिन्छ। पहिले सामान्यतया तटस्थ को लागी भेटिन्छ। यो इञ्जिनमा आपूर्तिको ईंन्धन रकम समायोजन गर्न डिजाइन गरिएको छ। दोस्रो सेन्सर तटस्थकर्ताको सञ्चालनको लागि आवश्यक छ। यो यो लाम्ब्दा जांच हो कि एक त्रुटि दिनेछ। उदाहरणका लागि, यदि फोर्ड फोकस2मा एक घडी उत्प्रेरक को सबै लक्षणहरू छन्, र ECU ले त्रुटि P0420 दिन्छ, त्यसपछि यो तटस्थकर्तासँग समस्यालाई संकेत गर्दछ। त्रुटिले ग्यास निर्वहनको कम दक्षतालाई संकेत गर्दछ।
विभिन्न कारहरूमा संलग्न तत्वहरूको विशेषताहरू
विभिन्न कारहरुको विचार गर्नुहोस् जुन उत्प्रेरक कन्वर्टर्स संग सुसज्जित छ, र अधिक सटीक ब्रेकडाउन को निदान गर्न। यो AvtoVAZ बाट घरेलू मोडेलहरू सुरू गर्न लायक छ। यो VAZ-2110, -2114, "केलिना।" यस तथ्यको अलावा कि मेशिन छिट्टै छिटो हुन्छ, खाली उल्टो उत्प्रेरक को अन्य लक्षणहरू र भित्ताहरू छन्। त्यसोभए, कार भित्रबाट देखा पर्ने एक आवाज हो। त्यहाँ एउटा भावना हो जुन कुचल पत्थर तटस्थको शरीरमा खसेको थियो। यो ध्वनि एक सिग्नल हो जसले सिरेमिक सब्सट्रेटको यांत्रिक विनाशलाई संकेत गर्दछ। यदि हामी आयोतित कारहरु बारे कुरा गर्छौं, त्यसपछि फोर्ड फोकसमा त्यहाँ छल्ल उत्प्रेरक को समान लक्षणहरू छन्। VAZ-21124 पनि यस्तो सफाई तत्वसँग सुसज्जित छ। यदि हामी घर "बाह्र" बारे कुरा गर्छौं, त्यसपछि तत्व भित्र भित्र शक्ति र शोरमा एकदम कमी छ। सामान्यतया, क्लगिंग वा उत्प्रेरक रिफ्लो पहिचान गर्न र निर्धारण गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। यी सबै चिन्हहरूले पनि सेन्सरहरू, पावर प्रणालीमा गल्तीहरू, इग्निशनको खतरालाई पनि संकेत गर्दछ। ध्यान दिनुहोस् कि अन्तिम दुई प्रणालीमा विफलता कारण उत्प्रेरक छ। लक्षणहरू पुष्टि छन्। यदि कार खराब गुणस्तर ईंन्धन द्वारा ईंधन गरिन्छ भने, ईन्धन मिश्रण राम्रो तरिकाले पकाएको छैन। यदि गलत छन् भने, दहन कक्षमा असामान्य रूपले मिश्रण जलाउँछ। यसको कारणले, बर्बाद ग्याँसमा ठूलो मात्रामा गाल छ। यो कारण तपाई अक्सर यी नोडहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण हो। उत्प्रेरक मा कक्षहरू छिटो र पिघलिएका छन्।
नोड 200,000 किलोमिटर भन्दा बढी काम गर्दछ। तर रूसी सर्तहरूमा यो अवधि घट्दैछ। उत्प्रेरकहरू खराब ईन्धन गुणस्तर, उच्च तेलको खपत, गलत तरिकाले समायोजित इग्निशन प्रणाली, यांत्रिक क्षतिको कारण असफल हुन्छ।
कसरी निदान गर्ने?
आउनुहोस् कि कसरी उत्प्रेरक छ भने निर्धारण गर्न कसरी हेर्नुहोस्। विधिहरू हरेकको लागि उपलब्ध छन् र विशेष कौशल र ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन। यो कार सुरु गर्न र यसको अधिकतममा इन्जिन गति प्राप्त गर्न आवश्यक छ। साथै इन्जिनले कम, मध्यम र उच्च आवृत्तिमा मुटाइयो। प्रत्येक मोडमा, पेडल अचानक फ्लोरमा थिचिएको छ। मोटर असफल हुनु हुँदैन, तर, यसको विपरीत, तीव्र प्रतिक्रियाहरु। यदि कमजोर प्रतिक्रिया हो वा इन्जिनले 5,000 भन्दा बढी क्रालोल्यान्ड्सलाई अवार्ड गर्न चाहँदैन भने, यो तटस्थकर्तालाई प्रतिस्थापन गर्न सोच्न सार्थक छ। उत्प्रेरक जाँच गर्न अर्को तरिका यहाँ छ ।
संकेत र लक्षणहरू पुष्टि भए, र यो समय निश्चित छ कि यो तत्व निश्चित छ। निदान को लागि, आफ्नो हात निकास पाइप मा राख्नुहोस। निकास गैसहरू आवेगहरू द्वारा संचालित हुन्छन्। तपाईं आफ्नो हातमा सही रूपमा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै प्रत्येक सिलेंडरबाट उनीहरूले धक्का दिएका छन्। यदि निष्क्रिय मा प्रवाह चिकनी र स्थिर छ भने, यसले सीधा न्यूट्रालिजरको बोल्छ। यदि तपाइँ ट्रिगरमा थिच्नुहुन्छ, र त्यसपछि मोटर मल गर्नुहोस्, तिनीहरू बिस्तारै बाहिर जान्छन्। यी ग्याँसहरू छन् जुन संकुचित उत्प्रेरकको कारणले संचित हुन्छ।
त्यसोभए हामीले पत्ता लगाउने लक्षणहरू पत्ता लगाउन सक्दछौं। उत्प्रेरक को लागी राम्रो तरिकाले काम गर्नका लागि, विशेषज्ञहरूले सिफारिस गर्छन् कि तपाईं कार केवल उच्च गुणस्तर ईंधनसँग भरेर र समयमै सबै प्रणालीलाई कारमा निदान गर्नुहुन्छ।
फ्रैंकफर्ट मा मोटर शो: खेल कार BMW M6 GT3
"प्लेस्टी दीप": समीक्षा। Plasti Dip: विशेषताहरु, आवेदन
VAZ 21154 - राष्ट्रिय कारको नयाँ रूप
लग देखि बगैचा फर्नीचर: निर्माण
एक रूबिक गरेको घन 3x3 इकट्ठा कसरी उपयोगी सुझावहरू
म के गर्भवती छु: को आतंक रोक्न!
सबै दुनिया भर तिपहिया साइकिलें